Waa maxay Magnesium L-threonate? Magnesium L-threonate (778571-57-6) wuxuu u taagan yahay qaabka ugu nuugista badan ee kaniiniyada magnesium suuqa maanta. Magnesium waa macdan caadi ah oo awood u leh inay ku jirto [...]
Markaad isbarbar dhigayso Pterostilbene Vs Resveratrol, waxaad ogaan doontaa inay jiraan xaqiiqooyin badan oo kaa maqnaa labada. Ku noolaanshaha nolol caafimaad leh waxay u baahan tahay inaad faallo ka bixiso a [...]
Waa Maxay Soosaarida Casaanka Casaanka ee Khamiirka Casaanka laga soosaaray bariiska khamiirka (RYRE) waxaa la sameeyaa marka nooc gaar ah oo caaryo ah oo loo yaqaan Monascus purpureus ay khamiiriso bariiska. Bariiskii wuxuu isu beddelay casaan madow [...]
Waa maxay Anandamide (AEA)? Magaca Anandamide (AEA) wuxuu ka yimid erayga Ananda oo macnaheedu yahay inay soo saarto farxad. Waa endocannabinoid ka mid ah kooxda amides fatty acid amides. Qaab ahaan, [...]
Glutathione waxay uga faa’iideysaa noolaha siyaabo badan iyadoo u shaqeysa sidii antioxidant. Waa isku-darka amino acid ee ku dhex jira unug kasta oo bani'aadam ah. Noole kasta oo nool wuxuu jidhkiisa ku leeyahay glutathione. [...]
Waa maxay Resveratrol? Resveratrol waa xarun dabiici ah polyphenol oo u shaqeysa sidii antioxidant. Ilaha Resveratrol waxaa ka mid ah khamri cas, canab, berry, lawska, iyo shukulaatada madow. Dhismahani wuxuu umuuqdaa mid heer sare ah [...]